Madaxweyne Gaas: “Aqalka Sare anagaa ku doodney … ma aragtay meel ay jiraan, Faroole, CC Rashid!” (daawo) – Radio Daljir
Maajo 8, 2018 5:08 g 0
Madaxweynaha Dowladda Puntland, Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa maanta ka qaybgalay, khudbad saxaasi ahna ka jeediyey shir ka furmey Wasaarada Dastuurka, Arrimaha Federaalka iyo Dimuqraadiyaynta Dowladda Puntland, oo looga hadlayey arrimha Dastuurka Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Gaas ayaa faahfaahin ka bixiyey dastuurka Federaalka Soomaaliya iyo is waafajinta loo baahanyahay, habka fadaraaleynta, iyo waliba qaybsiga awoodaha iyo deeqaha caalamka. Gaas oo sheegay in Puntland ay “khasabtay” dhismaha Aqalka Sare, ayaa maanta sheegay in aysan waxba ku haysan, oo xataa kuwii khibradda lahaa ee uu u magacaabay ayna ugu hooreeyaan Faroole iyo Cumar Cabdirashid aanba laheyn meel ay ka baxeen iyo waxa ay maanta Puntland ugu toorranyihiin. Gaas ayaa sidoo kale sheegay in kuwa kale oo Aqalka Sare ku jira oo uu u magacaabay Aqalka Sare ay maanta qabtaan shirar jaraa’id oo ay ugu soo horjeedaan maalgashi Puntland.
Gaas ayaa ku booriyey guddigga ka qaybgalaya iswaafajinta dastuurka in ay feeginaadaan oo qunyar socod noqdaan, asaga oo xasuusiyey in Soomali is laysay oo siligga isla tagtey, welina aan laga heshiin. Intii dib-u-heshiisiin dhab ah laga helayana waa in aan naqaan waxa Xamar lala tagayo iyo waxa aan dastuur ka rabno, qofka shakhsiga ahna ka ilaalin kara awoodda dowladda.
Siyaasadda & Dhaqaalaha 454 Wararka 17316